Bahlukene phakathi ngokuvota - Umbono | isiZulu
Bahlukene phakathi ngokuvota - Umbono
Uphaphalazile uhulumeni - Umbono
Asinandaba kangako neDays - Umbono
Iphezu kwamaqhinga le ndoda - Umbono
Cape Town - Owesifazane waseMelika ugandaye umyeni wakhe ngemoto, ngemuva kokungakhombisi kwakhe ilukuluku lokuvotela uMengameli uBarack Obama.
Sibuze abafundi ukuthi kungakanani abakwenzayo ukuqinisekisa ukuthi abantu bavotela iqembu abalithandayo.
USiphiwe Love Khumalo uthe: Mina akukho esengake ngakwenza, ngikholelwa ekutheni umuntu nomuntu unelungelo lokuvotela noma ngabe ngubani afuna ukumvotela ngaphandle kokusatshiswa.
UJikephi Shange uthe: Ngikhankasa ngokuhamba ngingena umuzi nomuzi nginxenxa abantu ukuthi bavotele u-ANC ngoba nginenkolelo yokuthi leli yiqembu elingeza noguquko ezimpilweni zabantu.
U-Ayanda Ifpyb Ntshingwayo uthe: Mina ngiyakhankasa kuyimanje, ngikhankasela iqembu lami Inkatha Freedom Party ukugqugquzela abantu ukuthi kuyavotwa khona bezoba nezwi ekubusweni komphakathi nakubo bonke ohulumeni.
UMelusi Richman uthe: Angikaze ngivote futhi angifisi, ukuthi kuphatha bani kudliwa bani akungifakeli saka ekhaya lokho ftuhi abantu bepolitiki bayafana banamanga bonke.
Umfazi lona ubulawa wukuphapha, usengaze agxobe indoda ngemoto, cha ungumsangano nje kwaphela.
USiniko Nathi Chagi WaseBizana uthe: Sengike ngavota kodwa ngeke ngiphinde, akungisizi ngalutho kunalokho kusuthisa amadoda athile nokuthi kuphasiswa imithetho ephikisana noThixo okuwukuthi nami ngiyamphikisa uThixo ngoba yimi phela okhethe lo muntu oseshaya umthetho.
U-Alfed Monwabisi Mngcele uthe: Mina ngaqinisekisa ukuthi i-ANC iyaphumelela ngesikhathi sivotela ubaba uNelson Mandela,ngavota ngifuna ukuqinisekisa ukuthi iNkatha ayiluwini ukhetho, manje angisenandaba nokuthi ubani ophumelelayo ubani ongaphumeleli.